Qoysas kasoo barakacay Fatahaada Wabiga ee Sh/Hoose oo soo gaaray Muqdisho – SOMA: Somali Media Association
Qoysas kasoo barakacay Fatahaada Wabiga ee Sh/Hoose oo soo gaaray Muqdisho
In kabadan Laba boqol oo Qoys oo kasoo barakacay Fatahaadda Wabiga Shabeelle ee Gobolka Sh/Hoose ayaa soo gaaray xerooyin Barakac oo ku yaalla Degmada Kaxda ee Gobolka Banadir.
Qoysaskan qaarkood waxa ay kusoo gaareen Mogdisho Lug, halka kuwa kalana ay soo heleen gawaarida Mooska usoo qaada Xamar, ee Beeraha Afgooye kasoo taga.
Waxaa ay soo gaareen Dalada Owbaalow oo kamida xeryaha barakacayaasha ugu waa weyn ee Degmada Kaxda, Daladaasi oo ay hoosyimaadaan Sideed Kaam, oo ay ku nool yihiin dad ka badan 700 oo Qoys.
Hooyo Faadumo Cabdow Xasan ayaa kamida Qoysaska Barakacayaasha ee soo gaaray Degmada Kaxda kana yimid Afgooye, Fatahaadda Wabigu waxa ay ka baabi’isey Dalagyo ugu beernaa Beer ugu taallay halkaasi.
Waxay guri ka sameeysan Maryo iyo Cooshado ka dhisatay Kaamka Sagaaroole oo ka tirsan dalada Owbaalow, waxa ay inoo sheegtay in qoyskeedu awoodi waayeen in ay iska soo bixiyaan kharashaadka Baabuurta, laakiin markii dambe ay ka codsatay Midkamida baabuurta Mooska usoo qaada Muqdisho in uu soo qaado.
waxa ay ka warameysa isbedelka nololeed ee ku yimid iyo dhibaatooyinka ay ku wajaheyso xeradaan barakac ee ay ku nooshahay.
“Biyaha dartood ayaan kaga soo baxnay guryaheeni, waxaan daganeen gediga shishe ee Afgooye , waxaan aheyn dad iska xamaasha, anigu qof iska jiraley ah ayaan ahaa, laakiin caruurteyda ayaa reerka u xamalayay oo tacbayay beer aan laheyn, beertiinna hadda biyaa daadsaday, aniga iyo sideed ciyaalkeyga kamida ayaa hadda xeradaan ku nool qofna noogama harin degaankeeni”. Ayey tiri Hooyo Faaduma Cabdow
Xareeda Isaaq oo ah 85 jir waxa ay iyada iyo Shan qoys oo kale ka yimaadeen degaanka Sabiib oo ka tirsan Gobolka Shabeelada Hoose .
Waxayna Kaamka ay hadda ku noolyihiin kusoo gaareen Lug, iyaga oo rafaad badan oo ay Cunno la’aan kamid tahay Wadada kala soo kulmay.
Kaamka uma soo gaarin sidii ay uga soo tageen Sabiib, ee waxaa jira Qoysas kale oo ay kala lumen intii ay wadada kusoo jireen.
Waxa ay Mudo Afar maalin ah dul saar ku yihiin qoys qaraabadooda ah oo ay ugu yimideen xeradan barakaca. Waxa ay Fatahaadda Wabiga ee uu Gobolka ka geystay kuwayeen Beer ay lahaayeen, iyada oo sheegtay in aysan laheyn rajo ah dib ugu noqoshada degaankii ay kasoo barakaceen madaama ay indhahooda ku arkeen bertii ay maal aduunyo ka qabeen oo biyuhu qaadeen.
“Waxaan kasoo barakacnay Sabiib Iyo Canoole , adduunyaan haysanay beraan falaneynay, balse waan isaga soo tagnay, biyuhu afarta jiho kasoo galeen beerteeni rajana kama lihin, maxaan rajo ka yeelanaa biyuhu aniga waa iga saramari rabeenee” Ayey tiri Xareeda Isaaq.
‘‘Waan soo lugeynay maxaan gaari kusoo raceynaa oo aan haysanaa afar cisho ayaan dhax soo aheyn, qofkii muslima oo aan dulnimaado ayaa waxaan cunno na siinayay hadana qoys ayaan dulsaar ku nahay isaga laftirkiisu awal barakac iska ahaa ilahey iyo walaalaha ayaan wax ka sugeynaa” Ayey hadalkeeda raacisay.
Muumina Xasan Cabdi waxay kamid tahay dadkii kasoo barakacay dagaalada ka socda Gobolka Shabeelada Hoose bilowgii sanadkan , waxa ay la daaladhaceysa korinta Carruurteeda oo Afar ah.
Waxaa u diyaarsanaa Bur ay ii sheegtay in uu siiyey Maamulka kaamku, xilligii aan la kulmayey, waxaana ay ka diyaarineysay Quraacda Subaxaasi ay cunilahaheen .
Muumina waxa ay ii sheegtay in Qoyskeeda uu soo dul dageen ilaa shan Qoys oo ay qaraabo yihiin, iyadana ay tahay qofka kaliya ee Saddexdii maalin ee lasoo dhaafay Qoysaska dhamaantood ay wax ka sugayeen.
“Horta awalba shaqa lama heysan oo barakacayaal ayaan iska aheyn, xaladeena waad dareemi kartaa hadana waxay xaaladu kasi dartay, markii ay qoysaskaan dheraadka ahi nasoo dul dageen waxba gacan kuma heyno cid wax nasoo gaarsiisana ma jirto, hadda burkaas aad ujeedid ee aan quraacda kasameynayo Gudoomiyaha Kaamka ayaa isoosiyay hadana waxa aan doonayaa in aan Centerka saf u galo Maamulka Kaamka oo qeybinaya hilibka xoolaha ee ciidul adxa’’. Ayey tiri Muumino Xasan Cabdi
Cali Cadow Maxamuhd waa Gudoomiye ku xigeenka Arimaha Bulshada Maamulka Degmada Kaxda waxa uu SOMA u sheegay in ag degmada kusoo kordheen Laba Boqol oo Qoys, balse ka maamul ahaan aysan awoodin in ay kafeeyaan baahida Barakacayaasha Cusub iyo kuwii hore ee halkan deganaa.
“Degmada Kaxda waxaa horay ugu noolaa kumanaan Barakacayaal ah, hadana waxaa kusoo darsoomay in kabadan 200 oo qoys ka maamul ahaan awooddeennu, waxba kama qabato, waxaan awoodnaa kaliya in aanu dib udejin usameyno dadkiina waxay u bahan yihiin madaama xilli robaad lagu jiro teendhooyin, baco, iyo wax ay cunaan sidaasi daradeed waxaan ka codsaneynaa Mamulka Gobolka Banaadir Dowlada Dhexe iyo Hay,Adaha Gar-gaarkuba inay dadkaan so caawiyaan’’ Ayuu yiri Gudoomiye Cali Cadow.
W/Q: Cabdixafiid Nuur Maxamuud oo ka tirsan Star FM
Maxay tahay xiriirka ka dhaxeeya Cadaaladda & Nabadgalyada?